नैतिकता र संवेदनशीलता हराएपछि
ब्रबिम कार्की शुक्रवार, फागुन ६, २०७३ 9333 पटक पढिएको
केही दिनअघि म एउटा सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेको थिएँ । बसका सिटहरू भरिएका थिए । केही मानिस उभिएका थिए । त्यो भीडमा म पनि थिएँ । कालीमाटीमा पुगेपछि बस रोकियो । दुधे बालक काखमा बोकेकी महिला बसमा चढिन् । उनी केही कमजोर र हत्तास मुद्रामा देखिन्थिन् । सिट नभएकाले उनी पनि उभिइरहिन् । ती महिला बच्चा बोकेर उभिएको सबैजसोले देखेका थिए । बच्चा रोइरहेको थियो, तर कसैले पनि उनलाई बस्न ठाउँ दिने छाँटकाँट देखाएनन् । बल्लबल्ल बस्न पाएको सिट अरूलाई छोड्ने मन कसैले पनि गरेनन् । बच्चाकी आमा बच्चालाई बोकेर उभिइरहन बाध्य भइन् ।
त्यस्तै एकजना महिला टेम्पोबाहिर झुन्डिएर यात्रा गरिरहेकी थिइन् र केही तल खसेको आफ्नो पाइन्ट सम्हाल्दै थिइन् । उनको त्यो अवस्था देखेका कोही पुरुष मित्रहरू सिट छोड्न तयार भएनन् । अर्को सवारी साधनमा एकजना महिला आफ्ना बच्चालाई दूध ख्वाइरहेकी थिइन्, तर त्यसलाई पुरुषहरू आमाको ममताभन्दा गलत नजरले हेरिरहेका थिए ।
अर्को दिन एक माइक्रोमा एकजना महिला बच्चा च्यापेर बसिरहेकी थिइन् । बच्चा रुन थाल्यो । ती महिलाले बच्चालाई दूध ख्वाइन् । पुरुषहरू घुरेर हेर्न थाले । यसैगरी अर्को दिन वसन्तपुरमा चिया खाँदै बसिरहेको बेला एकजना बच्चा रुँदै भोक लाग्यो पैसा दिनुस्न भन्दै एक व्यक्तिको हात समात्यो । ठाँटिएर बसेका व्यक्तिले ती बालकलाई झपारे, ‘अली उता बस्, जा छैन पैसा ।'
यी प्रसंग हुन् मानिसको संवेदनशीलता र नैतिकताको । सार्वजनिक साधनमा यस्तो विसंगति प्रशस्त देख्न सकिन्छ । आरक्षण सिटमा बसिरहेकाहरू शारीरिक रुपमा कमजोर र बच्चा बोकेका महिलालाई ठाउँ दिन बिरलै तयार हुन्छन् । हामीले समाचारमा पढेका छौं- ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो ट्याक्सीमा भेट्टाएको पैसा र सुन सोही व्यक्तिलाई फिर्ता गरेको । त्यस्ता समाचार सुन्दा जोकोहीको आत्मसन्तुष्टि बढाउँछ । संवेदनहीनता सार्वजनिक यातायातमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ । दुधे बालकलाई दुध खुवाइरहेकी आमाका क्रियाकलापलाई नग्नता देख्ने मानिसहरू यहाँ प्रशस्त छन् । के त्यही हो त हाम्रो नैतिकता र संवेदनशीलता ?
हामी आफ्नो खल्तीमा भएको पैसा हराएमा चासो दिँदैनौं, तर सडकमा हात पसारेर मागिरहेका असहायलाई दिन हिच्किच्याउँछौं । हामी समाजसेवा त गर्छौं, तर स्वार्थी मनले । यस्ता स्वार्थी मनले गरिने समाजसेवा फेसन हुन पुगेको छ । अरुलाई देखाउनको निम्ति मात्र सेवा गर्छौं । अरूलाई सहयोग गरेको देखाउन हामी सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू राख्छौं तर व्यवहारमा बिरलै कार्यान्वयन गर्छौं । नैतिकताले हामीलाई खुसी बन्न होइन, खुसी हुनलायक बनाउँछ ।
हाम्रो मुलुकका राजनीति, आर्थिक, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, यातायात आदि क्षेत्रमा जिम्मेवार तहमा रहेका मानिसहरूमा नैतिकता र संवेदनशीलताको सर्वथा अभाव देखिँदा ती निकाय निकम्मा हुन पुगेका छन्
आजभोलि नैतिकता र संवेदनशीलताको खडेरी परेको छ । राजनीतिले प्रायः सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । कुनै निकाय अछुतो छैनन् । आफ्नै गोरुको बाह्रै टक्का भने झैं सबैलाई जित्नैपर्छ । लचकता, समझादारी त कुइरोको काग झैं हराएको छ । नैतिकताबिनाको राजनीतिले देश विकास सम्भव छैन । प्रायः नेताहरूमा जिम्मेवारीबोध नै छैन । जति बूढो भए पनि नेताहरू पद र शक्तिको पछाडि नै लागिरहन्छन् । चुनाउमा आशा र सपना देखाएकै भरमा चुनाउ जित्छन् र पद र शक्तिमा पुग्दासाथ सबै वाचा बिर्सिन्छन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकता अपरिहार्य हुन्छ । नैतिकताको राजनीति सबैभन्दा सुन्दर अभ्यास हो । नैतिकताको राजनीति गर्ने नेताले नै सबैको मन जित्न सक्छन् । यसका लागि आफूमा जिम्मेवारीबोध हुनु नितान्त आवश्यक छ, चुनौतीको सामना गर्न क्षमता हुनुपर्छ र आफ्नो घमण्डभन्दा पनि मूल्य र मान्यतालाई महत्व दिनुपर्छ । तर अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यो नितान्त अभाव छ । नैतिकताको कमीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसकारण कर्मचारीदेखि दलका नेता कार्यकर्तासमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । भ्रष्टाचारले देश जकडिएको छ र देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याएको छ ।
विदेशमा कोही पनि मानिसले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा राजीनामा दिने चलन छ, तर हामीकहाँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । हामीकहाँ त चुनाउ हारेका मान्छे पनि प्रधानमन्त्री भएका छन् । जति नै पटक हारे पनि नेताहरू सांसद हुन्छन् । भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले बीजेपीको विजयपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नेपालामा नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नभएका होइनन् ।
प्रशस्त छन् तर विडम्बना के भने त्यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ अवसर दिइँदैन । राम्रो काम गर्नेहरूलाई दोहोर्‍याएर मौका नै दिइँदैन । गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डितहरूले असल कामको सुरुआत गरेका थिए । अचम्मको कुरा, यस्ता नैतिकवान् नेता तथा कर्मचारी पनि मन पराउँदैनौं । त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा गर्न लागिपर्छौं । वास्तवमा हाम्रो मुलुकका राजनीति, आर्थिक, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, यातायात आदि क्षेत्रमा जिम्मेवार तहमा रहेका मानिसहरूमा नैतिकता र संवेदनशीलताको सर्वथा अभाव देखिँदा ती निकाय निकम्मा हुन पुगेका छन् ।
बुधवार, कात्तिक १, २०७४ जहाँ वर्षैभरि पुजिन्छन् कुकुर
सोमवार, असोज ३०, २०७४ विकृत सार्वजनिक प्रशासन
को बन्ला मुख्यसचिव ? 4432
मन्त्रीको डेरामै करोड खर्च 1840
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 1798
जहाँ वर्षैभरि पुजिन्छन् कुकुर 3447
जागिरका लागि भाैतारिँदै सहिदपत्‍नी 344
समयमा काम नहुँदा सेवाग्राही हैरान 212
सालोको कुटाइबाट भिनाजुको ज्यान गयो 215
मुद्दा सुनुवाइ साढे नौ बजेदेखि नै 758
निगालो काट्ने क्रममा लडेर एकको मृत्यु 429
जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ 1043
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 24059